छात्र र प्रशिक्षुका लागि कपाल कात्ने - शुरुआतीहरूको लागि - जापान कैंची
प्रशिक्षु र विद्यार्थी कपाल कात्री
घर / प्रशिक्षु र विद्यार्थी कपाल कात्री
किफायती मूल्यहरूमा व्यावसायिक कपाल काट्ने अनुभवको लागि उत्तम प्रशिक्षु हेयरड्रेसिङ कैंचीहरू ब्राउज गर्नुहोस्।
के तपाई सैलुन प्रशिक्षु खोज्दै हुनुहुन्छ हेयरड्रेसिङ कैंची सेट or नाई कैंची किट्स?
हामी पूर्ण विद्यार्थी कपाल काट्ने सेटहरू प्रस्ताव गर्दछौं जसमा प्रशस्त समावेश छ कैंची सामान आफ्नो किट कायम राख्न।
उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी कैंची ब्रान्डहरूबाट छनौट गर्नुहोस्: Jaguar कैंची, Kamisori भेडाहरू, Joewell, जान्तेत्सु, Ichiro, Mina, Yasaka कैंची र अधिक!
सैलुन र बार्बर अपरेन्टिस कैंची आज किन्नुहोस्!
Ichiro अफसेट कटिंग सिंची
यदि तपाइँ कपाल स्टाइलिस्ट वा नाई हुन अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो कामको लागि सही उपकरणहरू हुनु महत्त्वपूर्ण छ।
हामीसँग तपाईंको विद्यार्थी र प्रशिक्षु आवश्यकताहरूको लागि सही जोडी कैंची छनोट गर्ने बारे केही सुझावहरू छन्।
त्यसोभए तपाईं उद्योगमा भर्खरै सुरु गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाईं अपग्रेड खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईंलाई आवश्यक सबै जानकारीको लागि पढ्नुहोस्!
सैलुन प्रशिक्षु कैंची के हो?
जब तपाइँ पहिलो पटक सैलून उद्योगमा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, तपाइँ प्रायः सैलुन प्रशिक्षु कैंची प्रयोग गर्नुहुनेछ।
यी साना, हल्का तौल कैंची हुन् जुन शुरुआतीहरूको लागि उपयुक्त छन्। तिनीहरू पनि धेरै किफायती छन्, जसले तिनीहरूलाई विद्यार्थी र प्रशिक्षुहरूको लागि उत्कृष्ट विकल्प बनाउँछ।
सैलुन प्रशिक्षु कैंचीमा सामान्यतया सीधा ब्लेड र एक ब्लन्ट अन्त हुन्छ।
यसले तिनीहरूलाई कान, नेकलाइनहरू र ब्याङ्हरू वरिपरि कपाल काट्नको लागि आदर्श बनाउँछ। तिनीहरू विभाजित छेउ काट्न र अतिरिक्त कपाल हटाउनको लागि पनि उत्कृष्ट छन्।
नाई प्रशिक्षु कैंची के हो?
यदि तपाइँ नाई हुन अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँसँग एक जोडी नाई प्रशिक्षु कैंची हुनु आवश्यक छ।
नाई प्रशिक्षु कैंची सैलुन प्रशिक्षु कैंची भन्दा ठूला र भारी हुन्छन्, र तिनीहरूसँग लामो ब्लेड छ जुन यसको लागि उपयुक्त छ। कंघी कपाल काट्ने मा कैंची। यसले तिनीहरूलाई टाउकोको माथि र छेउमा कपाल काट्नको लागि उत्तम बनाउँछ।
नाई प्रशिक्षु कैंची पनि कपाल स्टाइल को लागी उत्कृष्ट छ। तिनीहरू ब्लन्ट कट, स्तरित कटौती, र बनावट लुकहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
प्रशिक्षुहरूको लागि कैंचीको सही जोडी कसरी छनौट गर्ने?
जब यो आउँछ कैंचीको सही जोडी छनौट गर्दै, तपाईंले विचार गर्न आवश्यक केहि चीजहरू छन्।
सबैभन्दा पहिले, तपाईले कस्तो प्रकारको कपाल काट्नुहुनेछ भनेर सोच्नुहोस्। यदि तपाइँ मुख्यतया सीधा कपाल काट्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाइँलाई साधारण बेभल वा उत्तल किनारा ब्लेडको साथ कैंचीको एक जोडी चाहिन्छ।
यदि तपाइँ पहिलो पटक कपाल काट्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाइँलाई माइक्रो-सेरेटेड किनारा भएको कैंचीको एक जोडी चाहिन्छ किनकि यसले कपाल झर्ने बित्तिकै समात्छ।
दोस्रो, तपाईले कस्तो प्रकारको काम गरिरहनु भएको छ भनेर सोच्नुहोस्। यदि तपाइँ धेरै परिशुद्धता कटौती गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाइँलाई छोटो 5.0 "वा 5.5" इन्च कैंचीको तेज ब्लेडको साथ आवश्यक पर्दछ।
यदि तपाइँ धेरै टेक्स्चरिङ गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, अर्कोतर्फ, तपाइँलाई पातलो वा बनावट कैंचीको एक जोडी चाहिन्छ।
अन्तमा, आफ्नो बजेट बारे सोच्नुहोस्। सैलुन प्रशिक्षु कैंची किफायती छन् र तिनीहरू छन् शुरुवातका लागि उत्तम कपाल कैंची.
नाई प्रशिक्षु कैंचीहरू अधिक महँगो हुन्छन्, तर यदि तपाइँ धेरै कटौती गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने तिनीहरू लगानीको लायक छन्।
हेयरड्रेसि sc कैंचीको प्रशिक्षु र विद्यार्थी दायरा २०० under मुनि अनलाइन उपलब्ध छन्।
पेशेवरको जस्तो कपाल काट्नको लागि तपाईंले is०० भन्दा बढी खर्च गर्न आवश्यक पर्दैन क्यायरको जोडीमा।
हाम्रो प्रशिक्षु हेयरड्रेसि sc कैंचीको ब्रान्ड समावेश गर्दछ Ichiro, Jaguar, Mina, र अधिक!
प्रशिक्षु कैंची के हो?
ह्यान्डलहरूको लागि आधुनिक अफसेट एर्गोनोमिक प्रयोग गर्नुहोस्
पेन्सन वा समान टेक्नोलोजी टेंशन समायोजकको लागि
बेभेल वा उत्तल किनारा ब्लेडहरू
कपाल कपालको यो गुण विद्यार्थी र प्रशिक्षार्थीहरूको लागि जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, जस्तो कि उनीहरू पेशेवर रौंका कपाल र नाईहरूको लागि हुन्। केश काट्ने प्रविधिको मास्टर गर्नको लागि तपाईंले उत्कृष्ट गुणस्तरको क्यान्सरको साथ कपाल काट्नु पर्छ जुन तपाईंलाई वास्तविक प्रो बनाउँदछ।
सैलुन र नाई प्रशिक्षु कैंचीको लागि किनमेल गर्दा, खोज्नुहोस्:
उच्च-गुणवत्ता काटन स्टील
आरामदायक एर्गोनोमिक ह्यान्डलहरू
स्लाइस, स्लाइड, ब्लन्ट, पोइन्ट, र सबै अन्य प्रकारको कपाल काट्ने तरिकाहरूको लागि तीव्र बेवल वा उत्तल किनारा ब्लेड
समावेश बोनस किट: कपाल कंघी, मर्मतसम्भार किट, स्टाइलिंग रेजर, केस वा थैली, र अधिक!
सबै भन्दा राम्रो कपाल कपाल, सेट, र किट अनलाइन किन्ने निर्णय एक गाह्रो हो, तर तपाईं जापानसिसर्स.कट.अउ मा विश्वास संग खरीद गर्न सक्नुहुन्छ!